Ndị uweojii na-ahụ maka ọrịa na-arịa ọrịa mere ka ụgbọelu United Airlines si Frankfurt gaa Newark banye United Airlines
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị uweojii na-ahụ maka ọrịa na-arịa ọrịa mere ka ụgbọelu United Airlines si Frankfurt gaa Newark banye United Airlines
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cameroon • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Fọdụ n'ime njem njem ụwa na njem nlegharị anya na-akpọ ya Miss Cameroon. Francoise Kameni abụghị naanị osote onye isi ala nke Baseball na Softball Federation nke Cameroon na onye otu International Softball Federation, mana ọ bụkwa otu n'ime ndị isi a ma ama na Cameroon na ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya n'Africa. Francoise bụ onye nnọchi anya gọọmentị maka Ndị njem nlegharị anya nke Africa na kemgbe eTurboNews onye nnọchi anya mba Cameroon maka afọ 20.
Ruo ọtụtụ afọ, a hụla Francoise na mmemme ụlọ ọrụ njem gburugburu ụwa.
Ọ hapụrụ Cameroon na mbido Machị gaa Berlin, Germany iji gaa ngosi ahia ahia ITB. Na nwute, ITB kagburu n'ihi Coronavirus n'ụbọchị ọ hapụrụ Douala.
Francoise nọrọ ụbọchị abụọ na Berlin wee gaa New York iji nyere ndị nnọchi anya gọọmentị nke Cameroon n'ọrụ. Edere ya akwụkwọ ka ọ laghachi na Cameroon na Machị 2. A kagburu ụgbọ elu ya n'ihi COVID-19 ma ọ rapaara na New York maka ihe karịrị izu 19.
Gee ntị na akụkọ dị ịtụnanya Francoise na-agwa eTurboNews mgbe ị na-eche ebe ị na-agafe agafe na FRAPORT.
Cameroonlọ ọrụ Embassy nke Cameroon mere ndokwa maka ndị nnapụta site na Paris ruo Douala na Eprel 17. Francoise tinyere ọtụtụ awa na ekwentị kwa ụbọchị mgbe ọ nọ na New York. N'ikpeazụ, United Airlines debara ya akwụkwọ na ụgbọ elu Lufthansa si New York na Paris site na Frankfurt n'April 4.
Lufthansa banyere ya na New York mgbe Francoise gosipụtara akwụkwọ ikike Schengen nke nwere ọtụtụ nnabata nke ndị nnọchi anya French na Douala nyere.
Mgbe ọ rutere na 9.30 nke ụtụtụ na Frankfurt na ụtụtụ Sọnde ma chọọ ịfefe na ụgbọ elu Lufthansa ya na Paris Charles de Gaulle Airport, ndị uwe ojii Federal Federal nke German jụrụ nbanye ya n'ihi mgbochi ókè Coronavirus.
Ndị uwe ojii German nyochara ikike ndị France ma ha enwetaghị ntụzịaka doro anya, yabụ ha nyere Nwada Kameni iwu ka ọ nọọ elekere 23 na mpaghara ọpụpụ nke ọdụ ụgbọ elu Frankfurt Enweghị nri ma ọ jisiri ike nweta otu iko mmiri maka oge ọ na-anọ ọdụ ụgbọ elu 24
Onye uwe ojii Federal Federal German gwara eTurboNews: “Ana m emere nwanyị ahụ ebere nke ukwuu, ma aka m kegidere. E mechiri ókèala anyị, Lufthansa ekwesịghịkwa ịnabata ya ịbanye na New York na Fraịde. Flightsgbọ elu Lufthansa bụ naanị ụgbọ elu na-azọpụta ndị Jamanị ịla. ”
eTurboNews rutere Lufthansa, mana ọ nweghị nzaghachi ọ bụla.
Francoise malitere ịrịa ọrịa mgbe ọ nọ na FRAPORT ma rịọ ka ọ hụ dọkịta na Sọnde. Enweghị dọkịta dị ma ọ gbalịsiri ike ịmụrụ anya.
Na ngwụcha elekere iri nke ụtụtụ Mọnde, ndị uwe ojii Federal Federal German duru ya gaa ụgbọ elu United Airlines ụgbọ elu 10 wee hapụ Frankfurt na 691 nke ụtụtụ gaa Newark, New Jersey.
O doro anya ma ọ bụrụ na a ga-anabata ya na United States na Newark. Ebe ọ bụ na ajughi ya maka ọnọdụ ahụike ya mgbe ọ na-ahapụ US na Fraịde, ajujughị ya mgbe ọ rutere na Frankfurt, a jụghịkwa ya ọzọ mgbe ọ na-abanye ụgbọ elu ya na Newark ọ kwesịrị inwe olileanya na Francoise anaghị ebu COVID-19 .
eTurboNews akpọ United Airlines tupu ọpụpụ ya iji mee ka ụgbọelu mata banyere egwu a nwere ike ịdị. Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ Chicago kpọrọ eTN ọ nweghị ihe ọ ga - eme.
Ozi nke ndị uwe ojii Federal German na Frankfurt International Airport nyere Francoise. A manyere Francoise ịbịanye aka n'akwụkwọ ahụ. Akwụkwọ ahụ dị n’asụsụ German, ma onye njem ahụ anaghị ekwu okwu ọ bụla n’asụsụ German.
Cameroonlọ ọrụ ndị nnọchiteanya nke Cameroon nyere ndị ọchịchị German na ndị France ikike banyere ụgbọ elu nnapụta na-arịọ ịnabata ya ka ọ gaa France, ka o wee nwee ike ijide ụgbọ elu ahụ
Ugbu a, Françoise nọ n'ụgbọ elu United Airlines na-aga Frankfurt na-aga Newark, New Jersey ka ha tọgharịa ọzọ na United States.
Enye ama ekeme ndisan̄a ye isụn̄utom esenidụt ke Cameroon man akan̄wam mme andikara United States.